Ruyi’s Royal Love in the Palace (2019) မြန်မာစာတမ်းထိုး – Gold Channel Movies
အခုဆိုရင်​ တရုတ်​အစိုးရက Drama palace ​တွေကိုရိုက်​ခွင့်​မ​ပေး​တော့ဘူးဆိုပြီးသတင်းထွက်​ခဲ့တာက
Ruyi’s royal love in the palace ဆိုတဲ့ကားနဲ့
Story of yanxi palaceတို့ရဲ့​ပြောင်​​မြှောက်​လှတဲ့အ​နောက်​နန်း​ဆောင်​က မိဖုရား​တွေကိုယ်​လုပ်​​တော်​​တွေရဲ့ အာဏာပြိုင်​ဆိုင်​မှု ယှဉ်​ပြိုင်​တိုက်​ခိုက်​မှု​တွေ​ကို ဇာတ်​လမ်းဇာတ်​အိမ်​​ကောင်း​ကောင်းအကွက်​ကျကျ ​အပြင်​အဆင်​​ကောင်း​ကောင်း​ကြောင့်​နဲ့ အခြားအချက်​၅ချက်​​ကြောင့်​အပါ ဆိုရှယ်​မီဒီယာ​ပေါ်မှာ​တွေ​ရော တီဗီလိုင်း​ပေါ်မှာပါဖြုတ်​ချရတဲ့အထိဖြစ်​ခဲ့တာပါတဲ့
အချက်​ငါးချက်​သိချင်​ရင်​ Cpop Cdrama Fans myanmar မှာသွားဖတ်​ကြည့်​ပါ
ဒီဇာတ်​လမ်းဟာဆိုရင်​ အားလုံးနဲ့သိပ်​မစိမ်းတဲ့ နာမည်​ကြီးမင်းသား wallace huo နဲ့ အသံ​အော​အော​လေးနဲ့သိုင်းကားအချစ်​​တော်​​တွေရဲ့ ဟွမ်​ယုံ​လေး zhou xun တို့နှစ်​​ယောက်​ရဲ့ လျှမ်းလျှမ်း​တောက်​နာမည်​ကြီးနန်းတွင်း​​ဇာတ်​လမ်းတွဲ​လေးပါ..rating 8.1 ရှိခဲ့ပြီး​တော့ 24ရက်​နဲ့ ကြည့်​ရှုသူ​ပေါင်း5billions​ကျော်​ခဲ့တဲ့ကား​လေးပါ
ဒီကားထဲမှာ မင်းသား Wallace huo ရဲ့မိန်းမ မင်းသမီး ruby lin​တောင်​ သူ့​ယောကျာင်္းရဲ့ မင်းကြီးဇာတ်​​ဆောင်​ကိုမုန်းလွန်းလို့ ကြည့်​​တောင်​မကြည့်​နိုင်​တဲ့အထိဖြစ်​သွားပါတယ်​တဲ့..
ချင်​ရင်းဟာ အူလာနာရာမျိုးနွယ်​စုမှသခင်​မ​လေးဖြစ်​ပြီး​တော့ ယုံကျန်​ဧကရာဇ်​ရဲ့မိဖုရား​ခေါင်​ကြီးရဲ့ တူမ​တော်​စပ်​သူလည်းဖြစ်​သည့်​အပြင်​ မင်းသား၎ ဟုန်​လီနဲ့လည်း ငယ်​ငယ်​ကတည်းက​မေတ္တာမျှလာခဲ့တဲ့သူပါ ဒါ​ကြောင့်​ဟုန်​လီဟာ ချင်​ရင်းကို သူ့ရဲ့တရားဝင်​ကြင်​ယာ​တော်​​တင်​​မြှောက်​ချင်​ခဲ့​ပေမယ့်​လည်း မိဖုရား​ခေါင်​ကြီးရဲ့အပြစ်​လုပ်​မှု​ကြောင့်​ ​ဆွေမျိုး​တော်​စပ်​မှု​ကြောင့်​ သူမဟာ တရားဝင်​ဇနီးအရာကို​တော့မရခဲ့ပါဘူး.. ဒါ​ပေမယ့်​မင်းသား၎ဟာ ချင်​ရင်းကိုမြတ်​နိုးချစ်​ခင်​လှတာ​ကြောင့်​ ဒုကိုယ်​လုပ်​​တော်​အဖြစ်​​တော့ မင်းကြီးဆီမှာ​တောင်းဆိုပြီးတင်​​မြှောက်​ခဲ့ပါတယ်​ ၆နှစ်​ကြာ​တော့ ယုံကျန်​မင်းကြီးနတ်​ရွာစံပြီး ဟုန်​လီ ​ပေါင်းမင်းသားက ထီးနန်းဆက်​ခံခဲ့ပါတယ် ချင်​ရင်းဟာ ကြင်​နာတတ်​ပြီး စာနာတရားရှိတဲ့မိန်းက​​လေးဖြစ်​​ပေမယ့်​ အ​နောက်​နန်း​ဆောင်​ရဲ့ကြမ်းတမ်းရက်​စက်​မှု​တွေ​ကြား​ကြောင့်​ သူမဟာစိတ်​​ပြောင်းပြီး တလှည့်​ထိုရက်​စက်​ကြမ်းကြုတ်​မှု​တွေကိုပြန်​သင်​ယူပြီး သူမရဲ့ရာထူးရာခံအာဏာအတွက်​အသုံးချလာခဲ့ပါတယ်​ ​သူမဟာ ​နောက်​ပိုင်းမိဖုရား​ခေါင်​ကြီးဖြစ်​လာတဲ့အထိ သူမကိုဆန့်​ကျင်​ပြီးလျို့ဝှက်​ကြံစည်​မှု​တွေကိုခံ​နေတုန်းပါပဲ
သူမနဲ့ သူမရဲ့ချစ်​လှစွာ​သောမင်းကြီးတို့ရဲ့ဆက်​ဆံ​ရေးက​တော့ အ​နောက်​နန်း​ဆောင်​ကအရှုပ်​​တော်​​တွေကြားမှာ ဆုတ်​ယုတ်​လာခဲ့ပါတယ်​။ ချင်​ရင်းတစ်​​ယောက်​ ဒီလိုခက်​ခဲလှတဲ့အ​ခြေအ​နေ​တွေကြားထဲမှာ သူမရဲ့မိဖုရား​ခေါင်​ကြီးရာထူးအတွက်​ဘယ်​လိုကာကွယ်​သွားမလဲ .. အ​နောက်​နန်း​ဆောင်​ကမိဖုရား​တွေကိုယ်​လုပ်​​​တော်​​တွေ ဘယ်​လိုအာဏာအတွက်​ယှဉ်​ပြိုင်​ကြမလဲဆိုတာ​စောင့်​ကြည့်​ကြပါအုံးရှင်​..
Original title 如懿传
အပိုင်း5နောက်ပိုင်းထပ်တင်ပေးပါဦးးး
အပိုင်း ၇ နှင့် နောက်အပိုင်းတွေ တင်ပေးပါဦး … အားပေးနေပါတယ် ခင်ဗျာ…
ကြာနေပြီ ဘဒိုရေး လုပ်ပါအုံးနော် အရမ်းတေကြည့်ချင်နေပီ
အပိုင်းသစ်တွေလုပ်ပါအုံးဗျ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် …………
12 နောက်ပိုင်းတွေ ထပ်တင်ပေးပါဦး ကြည့်ချင်နေပါပြီနော် ကျေးဇူးပါ
88 ပိုင်းထိဆိုတော့ အများကြီးစောင့်ရဦးမှာပဲ
88 ဆိုတော့များတြာေ့ာင့် တစ်ခါတင်ရင် ၁၀ ပိုင်းလောက်လုပ်ပဗျ။ ကျေးဇူးတင်ပါတနာ်။……….
အပိုင်းအသစ်တွေ မှန်မှန်နဲ့ မြန်မြန် တင်ပေးပါလားဗျာ. အားပေးလျက်ပါ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
19,20,21 လေးလုပ်ပါအုံး bro ရေးးးးးးး……………
19 လေး လုပ်ပါဦး နော် မြန်မြန် လေး
19 လေး မြန်မြန်တင်ပေးပါနော် ဇာတ်ရှိန်မြင့်နေပြီ အရမ်းကြည့်ချင်နေပါပြီလို့
ဒီတပတ် Ruyi ကားက မတင်တော့ဘူးလားဟင်
Waiting ပါ Admin ရေ
အပိုင်းအသစ်လေးမြန်မြန်တင်ပေးပါ Admin Please
ဆက်မတင်ပေးတော့ဘူးလား ဟင် ?
28-29-30 မီမီ မီ
တရက်တရက် အခါတသိန်းမကတော့ဘူးလို့ ဝင်ကြည့်မိနေတာလို့
28 28 30 မတင်သေးဘူးးးလားး အရမ်းကြည့်ချင်နေပြီ
တရက်တရက် အခါတသိန်းမကတော့ဘူးလို့ ဝင်ကြည့်မိနေတာလို့ Crd; plz လုပ်ပါအုံးဗျ။ နောက်ကျနေတယ် ဒီတစ်ခေါက်။
Admin ရေ ဘာဖြစ်လို့မတင်တော့တာလည်းဆက်ပီးတော့
အပိုင်းသစ်တွေကို openload နဲ့တင်ပေးပါလားးအခုလုံးဝဒေါင်းလို့မရလို့ပါ
ep41နောက်ပိုင်းလေးတေ တင်ပေးပါဦး adminတို့ေ၇
င်္FionaAugust 20, 2019Reply
41 နောက်ပိုင်းလေး တင်ပေးပါအုန်းလို့
44 နောက်ပိုင်းလေး အဆင်ပြေရင် တင်ပေးပါနော် ဇာတ်လမ်းအရမ်းကောင်းနေလို့ပါ
44 မှာ ဇာတ်ရှိန်တက်ပြီး ကျန်ခဲ့ပါတယ်၊ နောက်ပိုင်းတွေ မြန်မြန်တင်ပေးပါနော်၊ တခြား ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ်လို တစ်ပတ် နှစ်ပိုင်းလောက် ပုံမှန်တင်ပေးပါလား
မြှျောသူမောပီ… ဒါဒါ… ဒီဒီ…. 😛
တင်ပေးပါအူးဗျာ မျှော်ရတာသေတော့မှာပဲ 🙁
အပိုင်းသစ်လေးရရင်တင်ပေးပါအုံး မင်မင်ရေ ကြည့်ရတာဆန့်တငင်ငင်ဖြစ်နေပြီ။
ရက်မခြားဘဲ တပတ်ကို ၄ပိုင်းလောက်တင်ပေးရင်ကောင်းမယ် မင်မင်ရယ်
ep 52 နဲ့ နောက်ပိုင်းတွေ ဆက်တင်ပေးကြပါဦး ကျေးဇူးပါ
ဆက်မတင်တော့ဘူုးလားဟင် မတင်တော့ရင်လဲ မတင်တော့ဘူးပြောပါ မျှော်ရတာ မောနေပြီ
အပိုင်းသစ်လေးတွေ ထပ်တင်ပေးပါအုံးနော် မျှော်ရတာမောလှပြီ
အပိုင်းအသစ်ပါဆို Admin ရေ
တပတ်ကို ၂ပိုင်းလောက်တော့ တင်ပေးပါနော် ဘာသာပြန်တဲ့သူလဲ ပြောင်းသွားသလိုပဲ
admin ရေ Link သသှေားတယျထငျတယျဗြ
အပိုင်းသစ်လေးတွေကို တစ်ပတ် ကို နှစ်ပိုင်း သုံးပိုင်း လောက်တင်ပေးပါလား Admin ကြည့်ရတာ ပြတ်တောက်ပြတ်တောက် ဖြစ်နေပြီ
Facebook မှာ English version link share ထားတယ် မစောင့်နိုင်သူတွေ ၀င်ကြည့်လို့ရအောင်ပါ
်fionaJanuary 26, 2020Reply
1နှစ်လောက် စိတ်ရှည်ရတဲ့ကား ဒီတစ်ကားပဲရှိတယ် ဒါတောင် မပြီးသေးဘူး ဗြဲ
53/54 link error ပါ